Bachelor yeKisimusi Kudya | Martech Zone
Bachelor yeKisimusi Kudya kwemanheru
Muvhuro, Zvita 25, 2006 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Shamwari yangu yakanaka, Derek, anga achitumira tsamba, achifona nekutumira mameseji kwandiri zuva rese kuti andinunure kubva kune yangu Bachelor yeKisimusi Kudya kwemanheru. Mudzimai wake, Anne, anonaka kubika… gourmet cook. Vanoda kuti ndiuye nhasi (izvozvi) kuzodya kwakanaka nemhuri yavo. Kisimusi izuva remhuri, saka ndagara ndainzwa kusetsa ndakagara pasi kuti ndimedure chingwa neimwe mhuri. Kunyangwe vachiramba vachidana (Ndakamirira mapurisa kuti auye chero miniti), ndasarudza kudya kwangu kwemanheru.
Zvekutenda, vana vangu vakaita majee neni, "Ndeipi mhando ye pizza yataizodya?" Yakanga ichingova kurudziro yandaida kuti ndiite isingadaviriki yekutenda yekutenda. Isu takave nemabasa! Turkey, stuffing, mbatatisi, gravy, manhanga pie, mabhanzi, nezvimwewo zvese zvakabuda zvakakwana - uye kunyange iyo turkey yakanga isinganzwisisike - yakanyorova Butterball.
Iye zvino yava Kisimusi uye vana vangu vari kumba kwaamai vavo. Yasvika nguva ye Bachelor yeKisimusi Kudya kwemanheru!
Na3AM mangwanani ano, ndichitarisa nzira dzekutengesa mishonga yemaawa makumi maviri nemana, ndawana yangu Bachelor yeKisimusi Kudya kwemanheru:
Lay's Cheddar uye Sour Cream Potato Chips… ndizvozvo vanhu, vanoisa dhipi pamachipisi saka haufanire kutambisa nguva kunyudza. Uye ivo vaitengesa! Tenga 1 tora 1 mahara.
2 Makani eCampbell Akabikwa Steak Chunky Chili. Hapana asi chakanakisa!
2 Makani eGeneric Diet Orange pasoda yakakweretwa kubva kumuvakidzani wangu (Ndiri kumba-ndakagara katsi dzake nhatu)
Uye Gwenga? Iyo yakanaka ACID Blondie cigar. (Wakaiwana mune zip loc padhesiki rangu… yakakwana)
Ndakatora pikicha yekuchengetedza ndangariro munguva:
Imi vakomana mungafunge kuti ndinopenga kusiya chikafu chemanheru cheichi ... asi wedzera tafura yeterevhizheni, vatambi venhabvu uye mutorwa anokosha paNhoroondo Chiteshi, uye isu tine yakanyanya, Kisimusi yakanaka yaDoug!
Kisimusi yakanaka munhu wese!
Douglas Karr Monday, December 25, 2006 Sunday, September 30, 2012
Yega Yega uye Yemwoyo-inonzwa Kutenda Kwauri
2007 Ndokumbira Uuye neVatsva Editors
Zvita 25, 2006 na4: 36 PM
Zvita 25, 2006 na7: 03 PM
lol… ndiko chaiko kudya uko Doug. Ndiri kuita solo yega futi gore rino, asi ini ndainzwa kunge ndine mamwe matapiri nehuku pachinzvimbo. Iwo machipisi anotaridzika kuva akanaka kwazvo,… ndinoda mamwe.
PS Pane here nzira yekuwedzera chimwe chinhu, saka iyo system inondirangarira ini kushanya kwese? Ini handisi fan yekudzokorodza ruzivo rwangu nguva dzese. Ndatenda.
Zvita 25, 2006 na10: 42 PM
Ndatenda nekutaura nezuro husiku. Ndingafarire kukubatsira iwe beta kuyedza chigadzirwa kana wagadzirira. Ndatenda zvakare nemhinduro.
Dec 26, 2006 pa 2: 54 AM
Asi zvinotyisa kwazvo panguva imwe chete!
Dec 26, 2006 pa 7: 35 AM
Oo, ndinozviwana, haungopinduri kana kudzorera mafoni angu! 🙂
MERRY KRISIMASI shamwari !!!
PS - Kudya kwako kwemanheru kwaive kwakaremara (wega bhachura anoziva kuti Pizza Rolls ishamwari yepamoyo yemunhu)!
Zvita 26, 2006 na12: 05 PM
Iwe ikozvino unofanirwa kuenda kune yangu saiti uye uone zvinoitika kana mumwe munhu achitarisira kuona Doug pakisimusi yeKisimusi. http://www.drumminguy.com/?p=195
Zvita 26, 2006 na3: 55 PM
Ndichaenda naBill imwe zvirinani - iropa rinotyisa !!
Nguva inotevera gamuchira kukokwa kubva kushamwari dzako - chikafu chakanaka, waini yakanaka, (pamwe fodya yakanaka) uye hurukuro yakanaka - zvese zvinoshandiswa pakudya kwakakwana.
Zvita 27, 2006 na3: 15 PM
Iwe hauna chete kuenda nekuti Derek idork yakadaro. Uye ane utachiona hwemapepanhau… Haufanire kupa zvikonzero. Ndine chokwadi mushure mekudya ichi chakasiyana chikafu, anofara kuti hauna kuuya pamusoro PASHURE.